Vono olona tany Toliara :: Hiakatra Fitsarana ny mpiambina ilay lisea nahitana fatin-jazalahy • AoRaha
Vono olona tany Toliara Hiakatra Fitsarana ny mpiambina ilay lisea nahitana fatin-jazalahy
Iantefan’ny ahiahy tamin’ny fahafatesana zazalahikely, enin-taona, nalàna voamaso tany Besakoa Toliara, ny mpiambina ao amin’ny lisea Antaninarenina nahitana ny razana. Nambaran’ny mpanao famotorana fa misy ny porofo itazonana azy amin’io raharaha io. Hatolotra ny Fampanoavana, anio, ity mpiambina voarohirohy ity.
“Nandà sy milaza ho tsy mahafantatra momba ny fahafatesan’ilay zaza nisy namono io mpiambina io. Ahiana mafy anefa izy noho ny valin-teniny tamin’ny alina nahatongavan’ny fianakaviana nitady an’ilay zaza tao amin’ny faritry ny sekoly. Teo ihany koa ny tsy nanomezany ny fanalahidin’ny efitrano nahitana ny razana, toy ny efa fanaony mahazatra. Ireo rehetra ireo no miteraka ny ahiahy”, hoy ny polisy any Toliara.
Ankoatra ireo, naheno vaovao hafa momba ity raharaha ity ny polisy. Eo am-panaovana fanadihadiana sy fanamarinana izany izy ireo. Misy indray, araka ny fanazavana, ny olona karohina.
Vono olona narahina endrika halatra taova no nisy tany an-tampon-tanànan’i Toliara. Tany am-pilalaovana niaraka tamin’ny namany ilay zazalahy, enin-taona, tamin’ny tolakandron’ny alahady lasa teo, no tsy hita popoka. Hita faty izy, ny ampitso maraina. Tsy teo intsony ny voamasony havanana. Namoy ny ainy noho ny fandrenesana ny vaovao ratsy ny lehilahy iray, havan’ilay zaza niharam-boina. Razana roa no indray nokarakarain’ny fianakaviana.
Fandikana fepetra Ambenan’ny polisy ny fivarotana iray eny Andohantapenaka
Fanafihana sy halatr’omby Tovolahy maty voatifitry ny dahalo
Firaisana tsikombakomba Mpimasy telo saron’ny zandary tany Andilamena
Lozam-pifamoivoizana Fiarakely nivarina tany an-tanimbary
Fanadihadiana :: Naverina ny fomba fisehon’ny fanafihana teny Itaosy
Fanafihana tany Toamasina :: Maty voatifitra ny mpamily tsy nety nitondra jiolahy nandositra